11 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Resveratrol AASraw
/Blog/garari/11 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Resveratrol
Posted on 04 / 14 / 2022 by 阿斯劳 akanyora garari.
1. Chii chinonzi resveratrol powder?
2. Chii chinobva resveratrol powder?
3. Resveratrol powder inoshanda sei?
4. Chii chinobatsira kutora resveratrol powder?
5. Ndezvipi zvinokonzerwa ne resveratrol powder?
6. Iwe unotora sei resveratrol poda uye kuchengetedza?
7. Ungasarudza sei yakanakisa resveratrol poda yekuwedzera?
9. Resveratrol Powder Kudyidzana
10. Ongororo PaResveratrol Powder
Resveratrol i polyphenol iyo inonyanya kuwanikwa mumazambiringa, kunyanya ganda remuzambiringa. Iyi polyphenol inzira yekudzivirira yezvirimwa zvemazambiringa kurwisa utachiona uye inongoburitswa kana chirimwa chiri munjodzi. Komboni iyi inotorwa yotengeswa seyo resveratrol poda kana resveratrol poda yekuwedzera. Iyo resveratrol inobvisa poda inofarirwa zvakanyanya uye inopedzwa zvakanyanya nekuda kweiyo antioxidant zvimiro zvepolyphenol, pamwe chete nezvimwe zvakawanda zvinobatsira.
Chii chinonzi resveratrol powder?
Resveratrol kana 3,4′,5-trihydroxystilbene is a stilbenoid uye phytoalexin compound iyo inoburitswa nemiti kana ichirwiswa kana kukuvadzwa. Iyo polyphenol musanganiswa ine yakakwira antioxidant zvimiro, izvo zvakadzidzwa zvakanyanya kubva pakatanga-kuonekwa resveratrol muwaini, mukupera kwema1900s. Resveratrol poda ndicho chinhu chikuru chezvekuwedzera chinovimbisa hutano hunobatsira nekuda kweiyo antioxidant zvimiro zvekomboni. Pure resveratrol poda inoita iyo yakanakisa ingredient kune izvi zvinowedzera sezvo kushaikwa kwezvinosvibisa uye zvakasanganiswa-muhupfu zvinowedzera simba uye kugona kwekomboni.
Resveratrol yakatanga kuwanikwa muwaini, uye ndiko kuwanikwa uku kwakapa mhinduro shoma dzinobvira kuFrench Paradox. Kudya kweFrench kunonyanya kuenderana nemafuta akazara uye mafuta asina kunaka anowanzobatanidzwa nekuwedzera kwechirwere chemoyo muhuwandu hwevanhu.
Zvakadaro, chiitiko cheCHD muvanhu vekuFrance hachienderane nekudya kunoteverwa nevazhinji vevanhu ivavo, izvo zvakatungamira kutanga kwezwi rekuti, 'French Paradox'. Sezvo vanhu vekuFrance vachizivikanwa semumwe wevanonyanya kutenga waini tsvuku pasi rose, masayendisiti akafungidzira kuti zvaive mukati mewaini ndizvo zvakakonzera gangaidzo iri uye vanogona kunge vakarurama. Resveratrol muwaini tsvuku ine antioxidants uye mamwe ma cardioprotective zvivakwa akaiswa kuchengetedza maFrench kubva kuCHD kunyangwe iwo ane mafuta-akapfuma kudya.
Kubva zvakawanikwa, komboni yacho yakatorwa ne resveratrol poda vagadziri yekugadzira resveratrol yekubvisa poda iyo inozoshandiswa kugadzirwa kwezvekuwedzera. Panguva imwe chete, zvidimbu zvakasiyana-siyana zvekutsvagisa zvakatangwa kudzidza zvakanakira resveratrol poda kuti ipe humbowo hwechokwadi hwezvakanakira mukomboni.
Chii chinobva resveratrol powder?
Resveratrol inowanzo wanikwa muzvirimwa sezvo iriyo nzira yavo huru yekudzivirira. Zvizhinji zvezvibereko uye nzungu zvinodyiwa nguva dzose nehuwandu hwevanhu zvakapfuma mu resveratrol, kunyanya ganda remazambiringa. Iyi ndiyo nzira iyo waini inowana nayo yakakwirira resveratrol content, iyo yakawanda inotaurwa mutafura iri pasi apa, pamwe chete nemhando dzakasiyana dzewaini.
Beverage Resveratrol (mg/100 ml)
Waini tsvuku 0.27 0 - 2.78
Waini yeRosé 0.12 5.00×10−03 - 0.29
Waini yakachena 0.04 0.00 - 0.17
Waini inopenya 0.009 8.00×10−03 — 1.00×10−02
Muto wemazambiringa wakasvibira 0.00508 0.00 - 1.00×10−02
Kunze kwekunwa waini, munhu anogona zvakare kugamuchira resveratrol kubva kune zvimwe zvekudya, izvo zvese zvinotaurwa mutafura iri pazasi. Iyo yepamusoro yemukati ye resveratrol pamukombe wezvikafu izvi inoonekwa mumazambiringa matsvuku uye mulberry, kudyiwa kwezvose zviri zviviri zvinokurudzirwa zvakanyanya nekuda kweiyo yakanyanya antioxidant yemukati. Resveratrol, uye mamwe ma polyphenols, anogona kuverengerwa kune aya mabhenefiti emazambiringa uye murubheri.
chikafu kushumira Yese resveratrol (mg)
Nzungu (mbishi) 1 kapu (146 gramu) 0.01 - 0.26
Peanut butter 1 kapu (258 gramu) 0.04 - 0.13
Mazambiringa matsvuku 1 kapu (160 gramu) 0.24 - 1.25
Cocoa upfu 1 kapu (200 gramu) 0.28 - 0.46
Mulberry ganda 1 gram Kusvikira ku50
Nekudaro, zvakakosha kucherechedza kuti matafura ari pamusoro anoreva kune chikafu masosi e resveratrol. Pure resveratrol poda uye yakawanda ye resveratrol poda yekuwedzera ine resveratrol iyo yakatorwa kubva kuAsia chirimwa, iyo, Polygonum cuspidatum kana Japanese knotweed, kana Asian knotweed. Resveratrol poda vatengesi vangave vanopa iyo koniyuta kubva kune knotweed chirimwa kana kushandisa maribheri nematehwe emazambiringa kugadzira izvi zvinowedzera.
Resveratrol poda inoshanda sei?
Resveratrol ichiri kuongororwa nevatsvakurudzi pasi rese kuti vawane kunzwisisa kuri nani kwemaitiro ekuita kwekomboni, mumuviri wemunhu. Izvi zvidimbu zvekutsvagisa zvinotarisa pamhando dzemhuka, zvidzidzo zve-in-vitro, uye zvidzidzo zvekiriniki nechibvumirano chikuru chiri chekuti resveratrol yekuwedzera ine mhedzisiro yakananga pamasero membranes.
Zvichienderana nemabhenefiti aizivikanwa emukomboni, zvaive nyore kuti vaongorori vatarise mubiological target receptors izvo zvinowanzoita basa rekuburitsa izvi zvakanaka.
Mushure mokudzikisa pasi izvo zvingangotarisirwa, vatsvakurudzi vakaona kuti resveratrol inopindirana neNQO2, AKT1, GSTP1, estrogen receptor beta, CBR1, uye integrin αVβ. Nepo iwo chaiwo mhedzisiro yekudyidzana pakati peaya mareceptor uye resveratrol isinganyatso zivikanwa, zvinogona kuverengerwa kuti zvinozivikanwa mabhenefiti anonyanya kuitika nekuda kwekudyidzana uku. Nekudaro, zvingave zvisina kunaka kuramba mukana weiyo mabhenefiti anozivikanwa ari kuburikidza nedzimwe nzira dzekuita. Chete kumwe kutsvagisa kunogona kuita sarudzo.
Chii chakanakira kutora resveratrol poda?
Kune akati wandei mabhenefiti ekutora resveratrol poda, kubva pakuvandudzwa kwehutano hwemoyo kusvika kune hupenyu hurefu hwehupenyu. Aya mabhenefiti akadzidzwa zvakanyanya mumhando dzemhuka uye mamwe acho ari kudzidzwa parizvino muzvidzidzo zvekiriniki. Aya mabhenefiti anosanganisira, asi haana kugumira kune:
Waini inotendwa kuve ine akawanda antioxidants uye aya anotorwa kubva kune resveratrol muwaini. MaAntioxidants akakosha kurwisa reactive oxygen marudzi uye emahara radicals mumuviri. Iwo ekupedzisira maion asina kugadzikana anotora chikamu mukuita kwemakemikari kugadzira mamwe maion anokuvadza emuviri.
Resveratrol yave ichizivikanwa kukurudzira kugadzirwa kweantioxidant enzymes senge superoxide dismutase (SOD), thioredoxin, glutathione peroxidase-1, heme oxygenase-1, uye catalase. Zvese izvi antioxidant zvimiro zve resveratrol zvakaonekwa murabhoritari, zvisinei, zvave zvakaoma kuti masayendisiti azviratidze mu vivo. Sezvo bioavailability yekomboni yakaderera, hazvizivikanwe kana pane yakakwana yekomboni kuti ikwanise kuburitsa izvi zvinokonzeresa mumuviri.
Vatsvaguri vakambofungidzira kuti nepo resveratrol muropa isina kukwana kuburitsa mabhenefiti avanotsvaka, zvinogona kuitika kuti metabolites ye resveratrol ibudise iwo mabhenefiti. Nekudaro, iyi hypothesis yakakurumidza kukundwa nekuwana kuti ma metabolites, kunyangwe akawanda mukusungwa, aive neashoma antioxidant zvimiro pane resveratrol pachayo.
Estrogenic uye anti-estrogenic zviitiko
Izvo zvave zvichifungidzirwa kuti resveratrol ine estrogen-yakafanana maitiro zvakanyanya nekuti chimiro chemakemikari yeiyi polyphenol yakafanana chaizvo nediethylstilbestrol, inogadzirwa estrogen agonist. Tichifunga nezvechokwadi ichi, zvinogoneka kuti resveratrol, kana iri mumuviri, inosunga kune eestrogen receptors kuti ibudise estrogen-semhedzisiro.
Vachishanda pane iyi hypothesis, vaongorori vakagadzira ndiro dzePetri kuti dzidzidze mhedzisiro yesveratrol pane estrogen receptors. Yakakurumidza kuwanikwa kuti resveratrol, yakavakirwa pane zvakasiyana siyana, ingave yakaita seanopikisa kana anopikisa paestrogen receptor. Kumwe kutsvagurudza kunodiwa kuti pave nekunzwisisa kuri nani kwezvinhu zvinokonzeresa mugoni kana anopikisa mhedzisiro yemukomboni.
Resveratrol yave ichizivikanwa kudzivirira kukura kwemasero egomarara mumuviri wemunhu, uye inozivikanwa zvakare kukanganisa zviratidzo zvegomarara, zvimiro zvemaseru ane cancer anovabvumidza kuwanda uye kunzvenga kufa kwe immune-mediated.
Zvinhu zvakadai seangiogenesis uye inhibition yepro-apoptotic zvinhu zvinodziviswa uye zvinorwisana ne resveratrol poda inoshandiswa. Sezvo maseru egomarara asingatenderwe kukura kana kuvanda kuti asaonekwe, anowanzoita apoptosis kana kuzviuraya kwesero. Izvi zvinoguma nekufa kwemasero ese egomarara uye nekudaro, kudzivirirwa kwegomarara, kunyanya epancreatic, mazamu, prostatic, uye thyroid cancer.
Iyo cardioprotective zvivakwa, pamwe chete neiyo antioxidant zvivakwa, ndezvimwe zvekutanga zvakambo batsira zvekomboni kugadzwa. Iri bhenefiti rakabatsira kugadzirisa gangaidzo reFrance uye kubvira ipapo rakatsigirwa nehumbowo hwesainzi. Iyo chaiyo nzira iyo resveratrol inochengetedza moyo ndeyekuvandudza endothelial basa.
Endothelial dysfunction chiratidzo chakakosha chechirwere chemoyo chiri kuuya sezvo chinogona kutungamira kune isina kukodzera neutrophil extravasation, coagulation kusagadzikana, uye kunyangwe, thrombosis kugadzirwa. Izvi zvose zvinokonzera njodzi yechiitiko chikuru chemoyo.
Resveratrol inotarisa pakuvandudza basa rekupedzisira kwekugadzirisa kwemidziyo yeropa kuvandudza hutano hwemudziyo uye kuvandudza izvi chete zvakaratidzwa kuvandudza hutano hwemwoyo uye kuderedza zvakanyanya njodzi yekuvandudza mamiriro emwoyo akadai se coronary artery disease.
Kurapa kweDiabetes Mellitus, Type 2
Insulin kuramba kana kuderera kwe insulin senitivity, uye kufutisa ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvikuru zverudzi rwe2 Diabetes Mellitus uye izvi ndizvo zvikamu zviviri zvinonangidzirwa neresveratrol. Inovavarira kuvandudza lipid profile kurwisa nyaya yekufutisa pakati pevechidiki, izvo zvinoratidzawo kuti zvinobatsira mukuvandudza hutano hwavo hwemoyo.
Resveratrol kushandiswa kwave kwakabatanidzwawo nekuvandudzwa kwe insulin senitivity, saka, kugadzirisa zvese zveDM. Aya ndiwo mhedzisiro masayendisiti ari kuyedza kudzokorora muzvidzidzo zvekiriniki kuti vakwanise kupedzisa nehumbowo hwesainzi hwekuti resveratrol poda yekuwedzera inogona kurapa, kwete kubata, chirwere cheshuga mellitus.
Ndezvipi zvinokonzerwa ne resveratrol powder?
Resveratrol musanganiswa unowanikwa zvakasikwa muzvikafu zvinowanzo kudyiwa pasirese. Kunze kwekunge munhu asingawirirani nezvikafu izvi, zvakaita semazambiringa, nzungu, uye mabheri, kunyange huwandu hwakawanda hwezvikafu izvi hazvina njodzi kudyiwa.
Resveratrol haina mhedzisiro inozivikanwa uye hapana chepfu yakambotaurwa. Kushandiswa kweiyo yakawanda yeiyi stilbenoid compound haina hukama neipi yakashata mhedzisiro, zvichireva kuti inogona kudyiwa zvakachengeteka.
Sezvambotaurwa pamusoro, resveratrol ine estrogenic zvimiro uye kusvika kumwe tsvakiridzo yagumisa kuti yakachengeteka kuvakadzi vane estrogen-sensitive cancers, zvekuwedzera zvine resveratrol zvinofanirwa kudzivirirwa.
Mune zvidzidzo zvakaitwa kuongorora huturu hwemazinga e resveratrol powder, zvakaonekwa kuti vashandisi vakatora 1000 mg / zuva resveratrol vaiva nekunetseka kwepamuviri kwepamuviri zvakadai sekurwadziwa kwepamuviri, flatulence, uye manyoka. Mamwe manyoka akakurumbira akashumwa nevaya vanotora 2000 mg / zuva resveratrol. Zvakadaro, zvakakosha kuziva kuti matambudziko emudumbu aya anenge agara achigadziriswa zvega uye aisada kupindira kwekurapa.
Saizvozvo, nekuda kwekushaikwa kweruzivo rwekuti resveratrol inogona kuyambuka placenta here kana kupfuudza kuvacheche kuburikidza nemukaka wezamu, zvinokurudzirwa kudzivirira izvi zvinowedzera panguva yekuzvitakura nekuyamwisa. Kushandisa doro hakukurudzirwe panguva yekuzvitakura uye hazvikurudzirwe kuti vakadzi vane pamuviri vaedze kugamuchira zvavanoda zvezuva nezuva resveratrol kubva mukunwa waini.
Iwe unotora sei resveratrol poda uye kuchengetedza?
Iyo yakakurudzirwa dosage ye resveratrol powder ndeye 5 mg kusvika 25 mg, nevatsvakurudzi vanocherechedza peak resveratrol concentration mumuviri wemunhu neine imwe chete ye25 mg pazuva. Iyo yekuwedzera inobvumirwa zvakanaka mune zvese uye inotorwa zvakanaka kana ichitorwa nemuromo. Nekudaro, haigare mumuviri se resveratrol kwenguva refu nekuda kwekukurumidza metabolization uye kubviswa kwekomboni.
Resveratrol inosanganiswa kuti iparadzwe, ine glucuronic acid uye sulfates, zvichiita kuti resveratrol glucuronides, sulfates, uye/kana sulfoglucuronides. Iyo resveratrol iyo yakasanganiswa ne sulfates ndiyo inowanzo onekwa muweti yemunhu uye plasma uye ndiyo inotora nguva yakareba kuti ibviswe.
Pakazara, iyo bioavailability yekomboni yakaderera pane chete 0.5%, uye iyi yakanyanyisa kuderera bioavailability yakaita kuti masayendisiti afungisise kana kudyiwa kwe resveratrol poda kune chero mhedzisiro pahutano hwevanhu zvachose.
Kunyangwe uchitenga resveratrol poda hombe kana resveratrol hupfu huwandu huwandu, zvakakosha kuti utarise munzvimbo dzekuchengetera kune chaiyo resveratrol poda fekitori yemutengesi akasarudzwa.
Nzvimbo dzekuchengetera dzisina kukodzera dzinobvumira kubuda kwezuva kwakanyanyisa kana kuti mvura inopinda mukati mehupfu inogona kusvibisa hupfu uye hunoita kuti hukuvadze kudyiwa kwevanhu kana kuti huve husina maturo. Zvinoreva izvi ndezvekuti zvinokonzeresa mhedzisiro yakaipa kana isina mhedzisiro uye mabhenefiti, chero.
Sezvo zvakakosha semaitiro ekugadzira, mapuroteni ekuchengetedza akakosha zvakaenzana uye anofanirwa kutariswa zvakanyanya asati afunga kuisirwa mu resveratrol poda kutenga kubva kune mutengesi.
Zvakare, iyo protocol yekugadzira senge mune yekuchengetedza nhungamiro inoshandiswa nevanogadzira resveratrol poda inofanirwa kutariswawo. Chero kuwedzerwa kwetsvina kana muchetura panguva ino inoenda isina kutariswa inogona kuve chikonzero chekukuvadza kwakanyanya kwemuviri. Mutengesi anogara achiyeuka zvigadzirwa anofanirwa kudzivirirwa kana chinangwa chiri chekutenga yakanakisa resveratrol poda yekuwedzera.
Nzira yekusarudza yakanakisa resveratrol poda yekuwedzera?
Iyo yakanakisa resveratrol poda yekuwedzera chigadzirwa chinogadzirwa chakanyatso kutarisisa kune nhungamiro uye mapuroteni pamwe chete nekuchengetedza kwakaringana kwekupedzisira-chigadzirwa. Uyezve, inofanirwa kunge iine huwandu hunodiwa hwe resveratrol pasevhisi kuitira kuti vatengi vaone mabhenefiti ekuwedzera ivo pachavo.
Inofanirwa kuve yakachena resveratrol poda uye isina chero imwe komputa yakasanganiswa nayo sezvo iyo inogona kuderedza kushanda uye kunyura kweiyo yekutanga. Chero chipi nechipi chinowedzera chisingasviki maitiro aya, kunyange mudiki, chinofanira kudzivirirwa kuve nechokwadi chokuti kuwedzera kuri nani kuri kushandiswa kunovimbiswa kupa zvose zvinobatsira zve resveratrol.
Resveratrol Powder Application
Resveratrol poda inonyanya kushandiswa kune yayo antioxidant, cardioprotective, kudzivirira cancer, uye cognitive mabhenefiti.
Resveratrol Powder Kudyidzana
Resveratrol poda inowanikwa yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu pasina inoshumwa yakashata mhedzisiro kunyangwe nekudyiwa kwemari yakawanda. Zvisinei, kana ikatorwa nemimwe mishonga mishomanana, inogona kuunza kushushikana kukuru uye kuora kwehutano.
Usati watanga chero chekuwedzera, zvinokurudzirwa kuve nehurukuro yakadzama nachiremba wekutanga nezve chero mishonga iri kutorwa kana kutorwa kusvika nguva pfupi yadarika. Izvi zvinobvumira chiremba kuti akurudzire zvakanyanya kana nguva yekumirira ichidikanwa kana kana mushonga kana kushandiswa kwekuwedzera kuchida kuregwa.
Resveratrol poda inogona kudyidzana nemishonga yakati wandei, inotaurwa pazasi:
Imwe yemhedzisiro ye resveratrol iyo ichangobva kuwanikwa ndeyekuti iyo polyphenol inogona kumisa kuunganidzwa kwemaplatelet, inova nhanho yakakosha mukubatanidzwa kweropa. Nekuda kweizvi, vanhu vanotora resveratrol vari panjodzi huru yekupwanya nyore uye kubuda ropa. Izvi, kana zvakasanganiswa nemigumisiro yemishonga inorwisa maronda, inowedzera uye inogona kuguma neropa rinenge richiisa upenyu pangozi nekuda kwekunyanya kuderera kweropa. Kutora izvi pamwe chete hazvikurudzirwe.
Mishonga inogadziriswa neCYP enzymes
Resveratrol yakajairika CYP enzyme inhibitor. Iyo CYP enzymes yakakosha pametabolism yemishonga yakawanda muchiropa, uye apo zvinodhaka zvinotanga-kupfuura metabolism kuburikidza nechiropa zvinotorwa ne resveratrol, hazvizogadziriswi zvakanaka. Pane kudaro, maitiro anoshanda emishonga iyi acharamba ari muhurongwa hwevanhu, achiwedzeredza maitiro avo izvo zvinowanzokonzera kukuvadza kupfuura kunaka.
Wongororo PaResveratrol Powder
Resveratrol poda Reddit wongororo dzinenge dzakakwana zvachose nevashandisi vanopika nemabhenefiti. Ese mabhenefiti echigadzirwa ari kuwanikwa nevashandisi pasi rese, zvichikonzera mwero wepamusoro we4.7 nyeredzi kubva pa5 nyeredzi dzechigadzirwa ichi, online. Mumwe mushandisi aive nenhoroondo yechirwere chemoyo akasiya iyi wongororo ye resveratrol powder, 'Ndakave ne3 kurwisa kwemoyo uye ndine 20% kukanganisa kwemoyo.
Saka ndakatanga kurapa resveratrol, ndakatanga 500mg vhiki yekutanga mavhiki maviri akatevera ndakaputira dose yangu kusvika ku1000mg mushure memwedzi wekutanga ndakatanga kunzwa zviri nani pasina kurwadziwa kwepfupa (angina) pamazuva makumi matanhatu ndakasvetuka kusvika ku60mg kana 2000grams ye resveratrol. ikozvino ndinonzwa zviri nani kupfuura ndisati ndamboita MI yangu yekutanga ndakaona chiremba wangu wemwoyo achimutsanangurira hurongwa hwangu hwekurapa, Akanga asina chokwadi saka akarayira echocardiogram uye akaita WOW akati ndakaona izvi migumisiro kare, Akati murume ane 2 M. 3 yemakore, kukanganisa kwemwoyo kwose kwakaratidzika kunge kwaenda nekuwedzera kwe40% mukushanda kwemwoyo, Saka ndinopika ne resveratrol uye mumwe nomumwe wedu anofanira kunge ari pavhitamini iyi.'
Vashandisi vanowanzo fara nechigadzirwa uye vazhinji vavo vatendi vakasimba mumhedzisiro yekuwedzera, zvekuti vanoikurudzira nemufaro kushamwari nemhuri dzavo.
Resveratrol rudzi rwe stilbenoid rwe polyphenol iyo inonyanya kuwanikwa mumatehwe emazambiringa nemabheri. Iyo ine akawanda mabhenefiti, kunyanya cardioprotective maficha uye antioxidant zvimiro, izvo zvinokonzeresa kushandiswa kwakakura kweiyo resveratrol poda zvinowedzera asi zvakakosha kucherechedza kuti zvese izvi mhedzisiro hazvitsigirwe nedata resainzi. Resveratrol poda yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu, uye kunyangwe muhuwandu hukuru, inokonzeresa zvakapfava kusvika pakati nepakati gastrointestinal mhedzisiro iyo inenge inogara ichigadzirisa yega. Pakazere, resveratrol yakachengeteka, yakanyatso kunyudzwa polyphenol ine yakaderera bioavailability uye akati wandei mabhenefiti.
AASraw inyanzvi yekugadzira Resveratrol powder iyo ine lab yakazvimiririra uye fekitari hombe setsigiro, zvese zvinogadzirwa zvichaitwa pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system. Nzira yekugadzira yakagadzikana, zvose zvekutengesa uye zvekutengesa zvinogamuchirwa.Kugamuchirwa kuti udzidze mamwe mashoko pamusoro peAASraw!
Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu hwekuwedzeredza